Global Voices teny Malagasy » Siria: Iza no mandray $42,000 isam-bolana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Oktobra 2010 15:36 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Fitantanam-pitondrana, Toekarena sy Fandraharahàna
Siria, izay firenena sosialista teo aloha, dia nanomboka ny ezaka fanatsaràna ny ara-toekarenany tany amin'ny faramparan'ny 2003 tany. Ny tanjona nambàra tamin'ny fomba ofisialy fa hotratrarina dia ny hametraka an'i Siria ho eo anivon'ny toekarena manerantany, amin'ny fihazonana hatrany kosa ny fiahiana ny vahoakany eo ambanin'ny elobe antsoina hoe “Toekaren'ny Tsena Sosialy”. Nitondra haingana be nankany amin'ny firoboroboan'ny sehatra tsy miankina tao Siria ilay ezaka, nefa koa nitondra nankany amin'ny fitohizan'ny fitomboan'ny haavon'ny fahantràna sy ny tsy fitovian'ny fidirambolan'ny ao anatin'ny sehatra tsy miankina.
Nitroatra i Abu Fares nanoloana ity lohahevitra manaitra ity, tao anatina lahatsoratra iray nantsoiny hoe: “Ny Sehatra Tsy Miankina Siriana: Sangy ratsy ara-tsosialy sy ara-toekarena “:
Ny karama voambàra tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny Sehatra Tsy miankia Siriana, ho an'ny ora feno, dia miainga amin'ny $125 ($=Dolara) ny ambany indrindra ary tonga amin'ny $42.000 ny volana iray.
Io aloha izao no zava-misy amin'ny fandraharahantsika amin'izao fotoana raha atao anaty teny fohy sy tao anatin'ny 15 taona namelàn'ny governemanta halàlaka, nahatonga ny sehatra tsy miankina nitsipozipozy hanàndrana hanarina ny toekarena nikorosy fahana. Inona no nataon'ireo vato nasondrotry ny tany teo amin'ny Tsena malalaka Siriana sy ireo orinasa mahàraka ny toetr'andro, ny Nouveau Riche (mpanankarena vaovao) sy ny Old Money (Vola antitra /Vola Baoritra), ireo mpisoloky sy ny faramandimbiny, ireo mpanampitrisa noho ny ezaka nataony sy ireo vitsy an'isa sasany amin'izy rehetra ireny, ary ireo mpandraharaha tsongoim-bolo mba ho fandraisana anjarany tamin'ity firenena ity ankoatry ny famelàny azy hangàina sy ho lany otrikarena, ny fahaiza-manao sy ny hareny ary ny fanimbàna ny tontolo iainana ao aminy?
Abu Fares dia manoritsoritra rofy sy tsy fahatomombànana maro eo amin'ny sehatra tsy miankina, isan'izany ny tsy firaharahiany ny andraikiny ara-tsosialy, ny tontolo iainana ary ny fandosirana hetra.
Ehsani, Siriana iray mpahay toekarena monina any Etazonia, dia namoaka fanamelohana amin'ny antsipirihany an'ilay lahatsoratra nataon'i Abu Fares‘ mikasika ny Syria Comment , bilaogin'i Prof. Joshua Landis. Ao anatina lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe: “Ny Tsiny ao Siria dia ny Karàma Varimasaka ” [Ang], i Ehsani dia milaza fa raha toa ny fanavaozana ara-toekarena tsy maintsy handona mafy ny olona sasany, tsy azo ihodivirana izy ireny ary tokony ho tohizana sy ho hafainganin'ny governemanta haingana. Manolo-kevitra ihany koa izy fa ny olana fototra dia tsy izay vola mety ho azon'ny saranga metimety, fa ny hakelin'ny vola raisin'ireo erý amin'ny tendro ilany:
Mba hijerena ilay olana amin'ny zoro / fijery hafa, tsy tokony hampivonto fo antsika mihitsy ny hoe ny mpitantana banky iray mahazo $42.000 isam-bolana, fa ilay mpikirakira vola (comptable) $400 monja no entiny mody rehefa faran'ny volana ary tsy maintsy miatrika ny ankohonany. Tsy ny hotely Four Seasons sy ny sàrany no hampivareraka antsika fa ny hoe tsy misy afa-tsy hotely iray no manana Kintana 5 ao Damas. Manana maherin'ny 70 i Dubaï. Toy izany koa, tsy ny Beemer misanda $170.000 no tokony haharangitra antsika, fa ny fisian'ny hoe mbola maro ny Siriana no mandeha amin'ireny fitateram-bahoaka madinika mikaperoperotra iarahana olona 9 tera-tsemboka (sy mantsina) ireny, izay miaina any ambanin'ny maridrefim-pahantràna.
Ny tolo-keviny ho enti-mandroso dia mifantoka amin'ny fanavaozana ny lalànan'ny fitantanan-ketra sy ny fampidirana fanarahamaso henjana momba ny fandosirana hetra, ary azo eritreretina koa ny hanapàhan'i Siria ny fifamatorany amin'ny tantara sosialista niainany:
Tsy hahalamina ny tokantrano ara-toekarenany mihitsy i Siria raha tsy manapaka tanteraka ny fifamatorany amin'ny sosialisma. Tsy ampy ny fampidirana fotsiny ireo fomba fiteny Alemana momba ny toekarena sy ny filazana fa ao anatin'ny “Toekaren'ny Tsena Sosialy” izao isika . Ho anà firenena iray izay voafetra ihany ny loharanom-bolany, ny governemantantsika tsy hila raharaha mihitsy any amin'ny famokarana kiraro, akanjo, kodiarana, rano anaty tavoahangy, labiera sy karazan'orinasa hafa miisa 244 miditra fatiantoka lava izao. Ny mpitantana tsirairay any amin'ireny orinasa tsy mitera-bokatsoa ireny dia mahita ny toerana nametrahana azy ireo ho toy ny fahazoan-dàlana hangalatra sy hanao tantely afa-drakotra.
Ao anatin'ny valinteny nataony ho an'ilay lahatsoratra, Abu Fares dia mamerina  tantara iray manokana niainany tao anatin'ny sehatra tsy miankina:
Anisan'ireo fahatsiarovana nahamenatra indrindra ny nipetrahana tanaty filankevim-pitantànana hanàpaka tetikasa vaovao iray, ny ozinina goavana indrindra eto Siria, izay ny tena foto-dresaka dia ny fandraisana sefosefo sy mpitantana ambony Indiana hiasa satria ireo Siriana manana ny fahaiza-manao ho amin'izany dia tsy mety hiasa amina karàma varimasaka nokasain'ireo mpitantana hatolotra.
Nahitàna mpandray anjara maro ilay adihevitra, na izany tao anatin'ny sokajy fametrahana fanamarihana, na tany anatin'ny lahatsoratra. Alex, nanamarika tao  amin'ny lahatsoratr'i Ehsani, milaza fa tokony hihaino misimisy kokoa, ary mihaino tsara izay tena filàn'ny vahoakany amin'izao fotoana ny governemanta Siriana:
Alohan'ny tena handraisantsika fanapahan-kevitra hoe hikisaka miankavanana, tsy mantsy ilaintsika, na ahoana na ahoana, ny “manontany ny vahoaka Siriana” hoe hatraiza no tian-dry zareo hanaovana dingana hialàna amin'ny sosialisma. Tokony hanao fitsapan-kevitra madio tsara ho solon'ny fitokiana fotsiny amin'ny fijerin'ireo manampahaizana manokana (hatramin'ny fitsidihana ireo mpitantana banky tandrefana, ka hatrany amin'ireo solombavambahoakan'ny antoko Baath tao amin'ny fivorian'ny governemanta) izay manoro hevitra ireo mpanapa-kevitra ny amin'ny fomba atao sy ny hoe hatraiza no havaozina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/21/10113/
 Ny Sehatra Tsy Miankina Siriana: Sangy ratsy ara-tsosialy sy ara-toekarena: http://www.abufares.net/2010/10/syrian-private-sector-socioeconomic.html
 Ny Tsiny ao Siria dia ny Karàma Varimasaka: http://www.joshualandis.com/blog/?p=7598
 dia mamerina: http://www.joshualandis.com/blog/?p=7598#comment-240087
 nanamarika tao: http://www.joshualandis.com/blog/?p=7598#comment-240089